Kooxda Real Madrid ayaa ku guuleysatay horyaalkeedii 34aad ee LaLiga | Dusta News
Home > General > Kooxda Real Madrid ayaa ku guuleysatay horyaalkeedii 34aad ee LaLiga
July 17, 2020 July 17, 2020 Dusta News210Leave a Comment on Kooxda Real Madrid ayaa ku guuleysatay horyaalkeedii 34aad ee LaLiga
Waa markii 34-aad ee taariikhdooda qaaliga ah, Real Madrid ayaa ah horyaalnimada LaLiga.
Real Madrid ayaa loo caleemo saaray horyaalnimada LaLiga markii 34aad iyadoo kulan ay u harsan tahay ka dib markii ay khamiistii ku garaaceen Villarreal 2-1.
Guushii Los Blancos ee Estadio Alfredo Di Stefano ee ka dhacday xaruntooda tababarka ee Valdebebas ayaa la micno ah inay hogaamiye aan la isku halleyn karin ku hayaan kooxda ay xafiiltamaan ee Clasico ee Barcelona, ​​taasoo natiijada Osasuna ka dhigtay macno la’aan.
Waa horyaalkii ugu horreeyay ee LaLiga ee Madrid tan iyo xilli ciyaareedkii 2016-kii, waxayna la micno tahay inay hadda ku guuleysteen horyaalnimada sideed jeer in ka badan Barca, oo ku dhameysan doonta kaalinta labaad.
Zinedine Zidane ayaa haatan ku guuleystay 11 koob labo mar oo uu ku sugnaa garoonka Santiago Bernabeu tanina waa marki ugu horeysay tan iyo markii uu ku soo laabtay kursiga kooxda laga hogaamiyo bishii Maarso 2019.
Tababaraha reer France ayaa ka tegey ka dib guushii Madrid finalka Champions League ee 2017-18, waana markoodii seddexaad oo xilli ciyaareedyo badan uu kooxda ku hogaaaamiyo.
Madrid ayaa ku dhameysatay kaalinta seddexaad xilli ciyaareed liita xilli ciyaareedkii hore, kaasoo 12 jeer looga adkaaday LaLiga, laakiin keliya seddex kulan ayaa laga badiyay xilli ciyaareedkaan waxaana 10 jeer oo xiriir ah ay badiyeen tan iyo xilli ciyaareedkii ay dib u bilaabeen ka dib seddex bilood oo xanibaad u saarnaa coronavirus dartiis.
Koob kale oo Champions League ah ayaa weli macquul ah, in kasta oo ay tahay inay ka gudbaan guuldaradii 2-1 ee lugtii hore ka soo gaartay Manchester City wareega 16ka si ay u sii wadaan hanashada horyaalnimada Yurub.
Wefdi Hordhac u ah Madaxweyne Farmaajo oo Gaaray Dhuusamareeb
Madaxweyne Qoor Qoor oo dib ugu soo laabtay magaalada Dhuusamareeb
Galmudug oo Ciidamo Cusub tababar u furtay